सोलुखुम्वुलाई देशकै समृद्ध नमुना जिल्ला बनाउँछु –युवानेता गणेशबहादुर बस्नेत - Bartamansamaya
सोलुखुम्बु जिल्लाको युवा पुस्तामा प्रसस्तै सुनिएको नाम हो गणेश बहादुर बस्नेत । सोताङ गाउँपालिका स्थायी घर भएका बस्नेतको पारिवारिक पृष्ठभूमि पुस्तौंली देखिनै नेपाली कांग्रेस सँग जोडिएको छ । बुवा कृष्णबहादुर बस्नेत विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको मेलमिलाप नीतिसँग अत्यन्तै प्रभावित समाजसेवी थिए । समाजलाई फरक र आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउनु पर्दछ भन्ने अभियानमा रहेका कृष्णबहादुर २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नै वडामा उम्मेद्वार बन्नु नै जीवनको अन्तिम क्षण बन्यो ।
वडामा उम्मेद्वार बनेपछि एमालेका कार्यकर्ताको अपहरणमा परेका कृष्णबहादुर र छोरा गणेश छिमेकीको घरमा बन्दक बनाईए । संयोगले गणेश बन्दकोठाबाट भाग्न सफल भए तर, अपहरणमा परेका बुवा कृष्णबहादुरको अवस्था अहिलेसम्म पनि अज्ञात नै छ । उक्त घटनालाई राज्यले समेत राजनैतिक घटनाक्रम भनेर पीडित परिवारलाई न्याय दिन सकेन ।
बुवाको अपहरण गरी बेपत्ता बनाईएपछि गणेशबहादुरको कांग्रेस राजनीति प्रति झनै झुकाब बढ्यो र बिद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय बने । नेपाल बिद्यार्थी संघको स्कुल इकाई अध्यक्ष देखि जिल्ला समिति सदस्य हुँदै ०५३ सालमा आर आर क्याम्पसमा इकाई सचिवको समेत जिम्मेवारी पाएका थिए । कांग्रेस भएकै कारण तत्कालिन माओवादी बिद्रोहीले बस्नेतको घरजग्गा कब्जा गरी सम्पत्ती लुटेर विस्थापित जीवन विताउन बाध्य भएको तीतो यथार्थ छँदैछ ।
घरपरिवारमा यी बिभिन्न पीडा, ब्यथा रहँदा रहँदै पनि सामाजिक कार्यमा भने जुटि नै रहेका यी प्रखर युवा नेता बस्नेत अहिले पनि सोलुखुम्वु जिल्लाका युवा बर्गमा अत्यन्तै रुचाईएका ब्यक्ति हुन । नेपाली कांग्रेस सोलु काठमाडौं सम्पर्क समितिमा उपाध्यक्ष भई पाँच बर्ष काम गर्नु, वी.पी. चिन्तन प्रतिष्ठान केन्द्रिय सदस्य तथा जिल्ला सभापति भएर काम गर्नु, नेपाल भारत मैत्री समाजको केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य रहेर काम गर्नु, यस अघिका संबिधानसभा र स्थानिय निर्वाचनमा जिल्लाको चुनाव प्रचार–प्रसार समितिमा रहेर काम गर्नुले पनि नेपाली कांग्रेसको राजनैतिक पृष्ठभूमिमा अब्बल युवाका रुपमा देखिन्छन् ।
जिल्लाको प्रायः सबै खाले विकासे कार्यमा अग्रपंतिमा देखिएका उनको विकास प्रतिको मोह अचम्मकै मान्नु पर्दछ । जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिकालाई जोड्ने मोटरबाटो होस वा घरघरमा खानेपानी पुर्याउने अभियान होस, व्यवस्थित स्वास्थ्य चौकी होस वा आधारभूत र प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रको विकास नै किन नहोस यी सवै उनका प्राथमिकताका विषय हुन ।
राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन गरेका तथा लामो समय कांग्रेसको राजनीतिमा अनुभव प्राप्त मिलनसार र मृदुभाषि युवा नेता गणेशबहादुर बस्नेत आसन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सोलुखुम्बु क्षेत्र नं. १ बाट समानुपातिक तर्फको प्रत्यासी उमेद्वार हुन ।
निर्वाचनको बिषयमा गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ः
उमेद्वारी किन ?
आर्थिक समृद्वि, दिगो शान्ति, शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र शैक्षिक वेरोजगरी देशमा अत्यन्तै खड्किएको बिषय हो । पछिल्लो समयमा मुलुकले संविधान त पायो तर समृद्धि पाउन सकेको छैन । सोलुखुम्वू जस्तो विश्वको अग्लो सर्बोच्च शिखर सगरमाथा भएको जिल्लाको गौरब गर्ने विषय समेत धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।
राजनैतिक दलका नेताहरुले यसलाई खेलको मैदानमात्र बनाए तर आम नागरिकको गौरबको विषय बनाउन सकेनन् । म यी सवै विषयलाई चिर्न चाहन्छु । मेरो प्राथमिकताका क्षेत्रमा नागरिकको आधारभूत स्थास्थ्य, शिक्षाको नैसर्गिक अधिकार, युवालाई स्वदेश मै ब्यवसायीक रोजगारी, विकासका पूर्वाधार, सडक, खानेपानी, विद्युत, सूचना र सञ्चार प्रविधिको विकासले सिंगो जिल्लालाई समृद्ध बनाउने र विश्वकै प्रमुख पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा विस्तार गर्ने अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनाहरु छन् ।
योजनाहरु के के हुन ?
शिक्षा प्रचारमुखि मात्र भइरहेकोले प्राविधिक तथा ब्यावहारिक शिक्षा प्रणाली लागु लक्ष सहितको शिक्षा आजको आवश्यकता भएकोले दीगो विकासका लागि रोजगारमुलक शिक्षाको विकास गरी आर्थिक समृद्धतालाई प्राथमिकता दिनेछु । ©माछा मारेर खाने मात्र हैन माछा मार्न चाहिने बल्छी तथा जाल बुन्न सिकाउने किसिमको शिक्षा अहिलेको आवश्यकता होङ्ग ।
केहि उपचारमा निःशुल्क गरी अस्पतालमा भिड बनाउने प्रबृत्ति, सस्तो लोकप्रियतालाई निरुत्साहित पार्दै जनताको स्वास्थ्य उपचार नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोले यसलाई पुर्णत निःशुल्क बनाउन जोड दिई स्वास्थ्यलाई ब्यावसाय बनाउने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्ने । आम नागरिकलाई स्वस्थ्य बनाउनको लागि बिषादी रहित कृषि उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिई स्वस्थ्य रहन प्रेरित गर्दै सबै जनतामा जनचेतनाको विकास गराउने ।
कृषिलाई उद्योग र किसानलाई उद्यमीको रुपमा विकास गर्नु पर्दछ । अर्गानिक र व्यवसायीक आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न सकेमा मात्र नागरिकले स्वस्थ्य जीवनका लागि सफलता पाउनेछन् ।
जिल्लामा पर्याप्त श्रोत र साधन भए पनि यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा आर्थिक समृद्धितर्फ लम्कन नसकेको अवस्था देखिन्छ । मेरो पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र हो युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु, स्थानीय स्तरमै उद्योगधन्दाको विकास गरी स्थायी रुपमा युवालाई उद्यमी बनाउनु जसले गर्दा आर्थिक समृद्धिका साथै युवावर्ग उद्यमशिल बनुन ।
यहाँ दुधकोशी, हुँगा, इसु जस्ता धेरै नदिहरु छन् जसबाट लघु जलविद्युतको निर्माण गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा जिल्लाबासीलाई सर्वशुलभ र चौविसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउन सकेमा मात्र पनि युवालाई प्राविधिक क्षेत्रको पहुँचसम्म पुग्न पद्दत पुर्याउन सकिनेछ ।
धुले सडकहरुको स्तरोन्नती, ग्रामिण सडक र कृषि सडकको विस्तार, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्र भएकोले हवाई मैदानहरुको स्तरबृद्धि गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास मेरो प्राथमिकताका विषयहरु हुन ।
विपक्षीहरुको तालमेलको असर ?
सोलुखुम्वू जिल्ला नेपाली कांग्रेसको प्रभाव रहेको जिल्ला हो । पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक अवस्थाले विपक्षीहरु बलियो हुन सक्छन कि भन्नु स्वाभाविक आंकलन गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय निर्वाचन भनेको व्यक्तिगत चरित्रका आधारमा समेत मतदानको प्रभाव पर्ने भएकोले आम निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनमा यसको असर देखिँदैन । सोलु जिल्लालाई नेपाली कांग्रेसले जति बुझेको छ अरु कुनै पनि दलले बुझेका छैनन् ।
यस जिल्लामा युवावर्गको उल्लेख्य साथ र सहयोग प्रत्यक्ष रुपमा मसँग जोडिएको हुनाले समाज र जिल्ला प्रतिको उत्तरदायित्व मसँग छ । अहिलेसम्मको विकास निर्माण, सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि युवावर्गसँगको सहकार्य र हातेमालो भईरहेको हुँनाले ©आम युवा पुस्ता सँगसँगै म छु र युवापुस्ता म सँगै छङ्ग । सोलुखुम्वुको विकास समृद्धिका लागि म पार्टी र पदभन्दा माथी उठेर काम गर्ने भएकोले गर्दा समेत मेरो जितको सुनिश्चितता छ । बाम गठबन्धनले कुनै असर पार्न सक्दैन ।